Umthetho omtsha simplifies umgaqo-nkqubo we yokufumana ubumi kuba langaphandle abatyali-mali - Russia Ngaphaya
Umthetho omtsha simplifies umgaqo-nkqubo we yokufumana ubumi kuba langaphandle abatyali-mali — Russia Ngaphaya
Russian Prime Umphathiswa Dmitry Medvedev sele esayiniweyo a urhulumente ummiselo ngomhla simplification lomgaqo-nkqubo kuba yokufumana Russian ubumi kuba ezithile amaqela langaphandle entrepreneurs, abatyali-mali kwaye umntu specialists.
Utshintsho ezichaphazelekayo kuphela abo businessmen abantliziyo yonyaka ingeniso liwudlule ishumi yezigidi rubles (dollazi) kwaye abatyali-mali abantliziyo share kwi-eyinkunzi ka-Russian iinkampani waba ngaphezu kweshumi ipesenti. ‘Ngenjongo attracting iinqwelo-mali kwi — Russian kuqoqosho, esenziwe lula inkqubo kuba yokufumana Russian ubumi uza nkxalabo langaphandle entrepreneurs kwaye abatyali-mali abantliziyo umsebenzi yi-ibandakanywe Russian classifier ka-iintlobo kwezoqoqosho umsebenzi, kunye abanye ezizodwa, ifunda ummiselo.
Omtsha umthetho akazi, umzekelo, kuquka businessmen esebenzayo kulo wholesale urhwebo kunye Saserashiya
Ndivuma uza le nkqubo preferential kusebenza imisebenzi enxulumene nokulungisa ka-iimoto kunye nezithuthuthu, hotels, uluntu ukutya ezingama, real estate iinkampani, imisebenzi kunye headhunting nee-arhente, commercial iinkampani, okanye isemthethweni kwaye iyabala iinkonzo. ‘Ezi ukukhutshelwa ingaba conditioned yi kubekho imfuneko kuba ezongezelelweyo utsalekoname ezintsha abathatha inxaxheba kwi-ehambelana iintlobo imisebenzi, uxwebhu underlines. ‘Enjalo umgaqo-nkqubo ikho kulo lonke eli lizwe, kwaye ndiqinisekile ukuba iindaba ukuba Russian umthetho sele hastened ukwamkela ummiselo, ‘wathi Alexei Skokie, Umlawuli Yesebe Jonga Uqoqosho Economical Ucingo ngomhla Semfundo Yesikolo ka-uqoqosho lwezolimo kwi-Moscow. ‘Lo ngumzekelo ezibalaseleyo ithuba yandisa kobuninzi bamanzi umsebenzi iindawo kweli lizwe ngexesha recession yintsholongwane i-economic koxinzelelo ka-sanctions. Ngokunxulumene Skokie, kuyimfuneko ukuze uphephe a imeko apho ukuze ufumane ubumi, ingeniso a businessman kwaye yakhe yeshishini kufuneka zingaphezu a stratospheric inqanaba. Nangona kunjalo, Vladimir Kalamanov, Umlawuli Yesebe Likarhulumente Regulation of Uqoqosho kwi-Russian ye-ofisi kamongameli Academy of National Uqoqosho Yolawulo Karhulumente, isitsho skepticism njengoko nokuba umthetho ebeya kuba ngokwaneleyo ekhaya. ‘Ndinguye besoyika ukuba emva ekubeni ikuvumile, uxwebhu uya kuthwala kakhulu kangako othile indalo kwaye akayi kuba enkulu ukusebenza ngomhla amancinane ezingama, wathi Kalamanov.
‘Ke kubalulekile ukuba esi sigqibo akunjalo kuba nje ukwazisa uwonke-wonke yiya kuba urhulumente ukuba andisayi ngqo kwenziwa kamva
Kalamanov ikholelwa ukuba nangona isigqibo kuza kuba kho insubstantial ukusebenza ngomhla Us eshiya recession, kubalulekile nonetheless ngokufaneleka
Ishumi Tips for Ukwenza Ulawulo Lwamashishini Izivumelwano kwaye Izivumelwano - Nolo